Sida loogu daro Google Translate barnaamijyada kale ee Android | Androidsis
Sida loogu daro Google Translate barnaamijyada kale ee Android
Turjubaanka Google waa codsi aan ka faa'iideysan karno wax badan taleefankayaga Android. Waxaa jira xeelado badan oo loogu talagalay, laakiin waxaa jira mid suurtagal ah in isticmaaleyaal badani aysan aqoon. Maaddaama aan ku dhexgeli karno barnaamijyo kale oo aan ugu adeegsanno taleefannadeenna qaab fudud. Sidan ayaan ku turjumi karnaa qoraallada ama farriimaha annaga oo aan ka bixin barnaamijka.
Waa hab ku habboon oo lagu akhriyi karo farriin ama qoraal ku qoran luqad kale iyo isla markiiba u turjun Marka sidaas darteed in badan ayaa ka heli doonta wax xiiso leh, gaar ahaan haddii ay leeyihiin barnaamijka turjubaanka Google ee ku rakiban taleefankooda Android. Hab wanaagsan oo looga faa’iideysto.
Waagii hore, hubaal in ka badan hal munaasabad ayaa nalagu qasbay nuqul qoraalka oo ku dheji mar dambe arjiga turjubaanka Google ee taleefanka. Nidaam ku dhammaan kara xoogaa culus, gaar ahaan haddii aan ku celcelinno dhowr jeer. Taasi waa sababta astaamaha loogu soo bandhigay barnaamijka ka hortagaya in tan la sameeyo. Markaa uma baahnid inaan nuqul ka qoro, laakiin waxaan marin u heli doonnaa tarjumaad toos ah oo ah qoraalka la yiri. Ama fariin ama qoraal caadi ah.
Sida loo adeegsado Gboard turjumaan isku mar ah
1 Toos ugu turjun qoraalka abka Android adoo adeegsanaya Google Translate
2 Adeegso taabo si aad u turjunto
Toos ugu turjun qoraalka abka Android adoo adeegsanaya Google Translate
Marka hore waxaan u baahanahay inaan u tagno turjubaanka Google taleefankeena Android. Waxaan fureynaa arjiga kadibna waxaan kusocon donaa qeybta menu ee arjiga. Ikhtiyaarrada aan ka helno liiska ku qoran, waa inaan galno goobaha arjiga. Waxay kuxirantahay nooca, waad ka bixi kartaa Settings ama Configuration.
Nidaamka dalabka gudahiisa ayaan ku eegi doonnaa Ikhtiyaar la yiraahdo Taabo inaad tarjunto oo aan galno. Markaan galno, waxaan marka hore helnaa ikhtiyaarka aan karti ugu yeelan karno, kaas oo markii ugu horreysay naafo ah. Marka waa inaan si fudud u gudubno si aan u dhaqaajino, anagoo dhaqaajineyna biiro aan ka helno. Waxay u egtahay in markaan dhaqaajino doorashadan nala tuso digniin shaashada, laakiin waa inaan si fudud aqbalnaa oo aan wax kale qaban.
Marka ikhtiyaarka la hawlgeliyo, Waxaan tagi karnaa qeybta Luqadaha La Doorbiday. Halkan waxaa naloo oggol yahay in aan kala dhig dhigno afafka tarjumaadaha aan ku isticmaali doonno shaqadan turjubaanka Google Waa wax iska caadi ah in si otomaatig ah loogu qaabeeyo luqadda ama luqadaha aan ku isticmaalno Android. Sidaa darteed, qaybtaan waxaan ku go'aansan karnaa kuwa aan dooneyno inaan u isticmaalno kiiskan. Markaad tan sameyso, wax walba waa la dejiyey. Waxaan horeyba ugu isticmaali karnaa shaqadan taleefankeena.
Tarjumaanada ugufiican Android
Adeegso taabo si aad u turjunto
Tubada Google Translate si aad u turjunto muuqaalka waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxaan ugu adeegsan karnaa qaabkan dalab kasta oo kujira taleefankeena Android. Fur arjiga aad rabto, tusaale ahaan codsi fariin ah, una tag fariin ku qoran luqad kale, tusaale ahaan. Markaa waa inaad doorataa farriinta la yiri su'aasha ka dibna dooro ikhtiyaarka nuqul.
Markii aan nuqul ka qoro qoraal luqad kale, waxaan arki doonnaa in xumbo ka muuqato shaashadda, koonaha kore, iyadoo la adeegsanayo astaanta tarjumaha Google. Kaliya waa inaan gujino xumbada la yiri, si tarjumaanku u furmo wuxuuna si toos ah noo tusi doonaa tarjumaada qoraalkaan aan hada xulnay. Adigoon ku dhajin ama aadan sameyn wax aad sameyso, tarjumaada ayaa si toos ah loogu soo bandhigi doonaa shaashadda.
Qaabkan waxaan horeyba ugu turjumnay wixii qoraal ama fariin ah ee ku saabsan Android. Tani waxay ku shaqeysaa barnaamij kasta oo taleefanka ah, waxaan kaliya u baahanahay inaan soo xusho qoraalka su'aasha ah oo aan isticmaalno ikhtiyaarka nuqul, si markaas xumbada tarjumaha Google ay uga muuqato shaashadda oo aan u helno tarjumaadeeda. Hawlgalku had iyo jeer waa isku mid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loogu daro Google Translate barnaamijyada kale ee Android
Bolo wuu ogaa mahadsanida macluumaadka. Heer sare
Xiriiriyaha Qoyska ee Google: Maxay tahay maxaase loogu talagalay?
Vivo Z1X ayaa dhawaan heli doonta nooc kala duwan oo leh 8 GB oo RAM ah